MODA | Article Detail | ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့မနက်စာကိုမလွတ်သင့်တဲ့အကြောင်း
မနက်စာဆိုတာတစ်ချို့လူတွေအတွက်မစားဖြစ်တဲ့ အရာတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကစီးချက်မညီတဲ့အခါမနက်စားကိုလွှတ်ထားတဲ့သူတွေများလာကြပါတယ်။ အိပ်ယာထနောက်ကျလို့ဖြစ်စေအလုပ်နောက်ကျ ကျောင်းနောက်ကျ နဲ့မစားဖြစ်ကြတဲ့မနက်စာကတကယ်တော့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ မနက်စာစားခြင်းကကျန်းမာစေတဲ့အပြင်တနေ့တာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက်အားဖြစ်စေတာပါ။ ဒီတော့မနက်စာမစားရင်လုပ်ရမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကကောင်းကောင်းမဖြစ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ပုံကအစ ကွာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မနက်စာကိုမကျော်သင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့မနက်စာမျိုးဆိုရင်တော့မစားတာကပိုကောင်းပါတယ်။ လူနည်းစုလောက်သာအိမ်မှာသေချာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီးမနက်စာကိုစားကြတာပါ။ အများစုကတော့အလွယ်တကူဝယ်စားတတ်ကြပါတယ်။
အဲ့လိုဝယ်စားတဲ့အစားအစာတွေကကျန်းမာရေနဲ့ညီညွတ်တဲ့မနက်စာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အမြန်ရနိုင်တဲ့ fast food တွေမှာလည်းတချို့ကအဆင်ပြေပြီးတချို့ကတော့မစားသင့်တဲ့မနက်စာပါ။ Healthy ဖြစ်စေတဲ့မနက်စာတွေထဲကတစ်ချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အများစုစားလေ့ရှိတဲ့မနက်စာကတော့ မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ထမင်းကြော်ပါ။ ဒါတွေကရောအာဟာရဖြစ်ရဲ့လားဆိုတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှရဲ့healthy breakfast စာရင်ဝင်ထားတဲ့ ၂မျိုးပါ။ ဓလေ့ထုံးစံအလိုက်စားသောက်ကျတဲ့အစားအစာတွေမတူတာမို့ ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကြက်ဥ၊ ဆန်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ထမင်း၊ မြန်မာမုန့်အများစုရယ် နောက်ပြီး ဂျုံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အစားအစာတွေ၊ အိန္ဒိယအစားအစာ အများစုကလည်း တကယ်ကိုအာဟာရ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဂျုံခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဇံ စတာတွေကတော့ ready made မဟုတ်တာမျိုးကသာ healthy breakfast ဖြစ်စေမှာပါ။ Fruit juice၊ milk၊ coffee၊ tea နဲ့ oak စတာတွေကတော့သင့်မနက်စာစရင်းထဲထည့်ထားသင့်တဲ့ healthy ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေပါ။ အဲ့လိုမနက်စာတွေကိုအခုဆိုလွယ်လွယ်ဝယ်ယူရပါသော်လည်း မစားဖြစ်တဲ့လူတွေရှိကြသေးတာမို့ ကျန်းမာစေဖို့ရာမနက်စာကိုမရှောင်သင့်ပါဘူးနော်။ နေ့တစ်နေ့ ရဲ ့အစမှာမနက်စာကိုမစားဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဓါတ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုကို နှေးစေပြီးအဆီပိုတွေကိုမချေဖျက်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။
မနက်စာစားခြင်းကဆာလောင်မှုကိုလည်းတားဆီးပေးနိုင်ပြီး နေ့လည်စာအချိန်မှာသင့်တင့်သလောက်ဘဲစားတော့တဲ့အတွက် weight တက်မှာမစိုးရိမ်ရပါဘူး။ မနက်စာစားခြင်းကဝစေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဆာလောင်မနေတဲ့တွက်တနေ့တာကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပြီးအတွေးအခေါ်ကောင်းတွေကိုရစေတာမို့စိတ်ဖိစီးမှုမများရတော့တဲ့အပေါ်ဆက်စပ်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရှိပါသေးတယ်။ ဒီတော့အချိန်လုပြီးအလုပ်လုပ်နေရရင်တောင် မနက်စာစားဖို့အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်လေးကြောင့်သင့်နေတစ်ဝက်လေးကပိုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာပါ။
Save ထားဖို့ပဲ မဟုတ်ပဲ တကယ် Workout လုပ်မယ်ဆိုရင် Follow ထားသင့်တဲ့ Youtuber များ
ခုလို Stay Home နေနေရတဲ့အချိန်မှာ သွားနေကျ Gym တွေ Fitness Center တွေကို လွမ်းနေရမယ့်အချိန်ပါ။ Gym တွေ သွားလို့မရတဲ့အပြင် အပြင်မှာ အားကစားလုပ်ဖို့အတွက်ကလည်း အပြင်ထွက်မရပြန်တော့ အကြံအိုက်နေမှာပါ။ ဒီပြဿနာကို ပိုက်ဆံတစ်ပါးမှ မကုန်ပဲ Covid ကလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။
နေ့စဉ် လန်းဆန်းဖို့ လိုနေတဲ့သူရော၊ ခန္ဒာကိုယ်ထိန်းသိမ်းချင်သူတွေအတွက်ပါ အိမ်မှာနေရင်း ချွေးတပြိုက်ပြိုက်ကျတဲ့ အထိ Workout လုပ်နိုင်မှာပါ။ ပုံစံမမှန်မှာ၊ စနစ်တကျမလုပ်မိအောင် ကိုယ်ဆော့ချင်တဲ့ အမျိူးအစားပါ ဆော့လို့ရအောင် Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ Youtuber တွေရှိပါတယ်။ Save ပဲ မ Save ထားပဲ တကယ်လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်နော်။
ကပြီး Workout လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
လှုပ်ရှားမှုများများနဲ့ Workout လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
စိတ်အပန်းဖြေမယ့် Yoga ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
Body Building လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်
Stay-Home ကာလမှာ အစားတွေစွတ်မစားမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
1st Wave တုန်းက ဝိတ်တောင်မကျသေးဘူးမလား
အခုထိနေရာအနှံ့အပြားမှာ ကူးစက်နေတဲ့ Covid-19 ကြောင့် ကျွန်မတို့အားလုံးလည်း အိမ်မှာပဲအတတ်နိုင်ဆုံးနေကြရတယ်။ အလုပ်အကိုင်အများစုလည်း Work From Home တွေဖြစ်ကုန်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကအိမ်မှာပဲရှိနေတာကြောင့် အရင်လို Schedule နဲ့မဟုတ်ပဲ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေလည်း အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလာတယ်။ အိပ်ချိန်တွေလည်းနောက်ကျပြီး မမှန်တော့သလို အစားစားတဲ့ အကြိမ်တွေလည်းပိုပြီးများလာတယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်လက်လှူပ်ရှားမှုလည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဝိတ်တက်ပြီးဝလာမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလို Covid ကာလမှာ အစားလျှော့စားတာတို့ ဝိတ်ချတာတို့ကို မလုပ်စေချင်သလို တစ်ဖက်ကလည်း အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိထားစေလိုပါတယ်။
Covid ကာလမှာမမတို့၊ ညီမလေးတို့ မုန့်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာစား၊ Milk Tea တွေခဏခဏ မှာသောက်နေမိတယ်မလား။ လေ့လာချက်အရ အခုလို Stay-Home ကာလမှာ မိန်းကလေးတွေ Overeating ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲကအများစုကတော့
• စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့် လိုအပ်တာထက်ပိုစားမိတတ်ကြပါတယ်။ Computer ရှေ့မှာ အကြာကြီးအလုပ်လုပ်နေရရင်လည်း စိတ်ငြီးငြူပြီး Snack တွေအများကြီး စားမိတတ်ကြပါတယ်။ ရေရှည်မှာကျ အဆီတွေများလာပြီး ဝိတ်တက်လာနိုင်တာမို့ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစေချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခုလို Stay-Home ကာလမှာ အစားတွေစွတ်မစားမိပဲ ဝိတ်မတက်အောင် ဂရုစိုက်ဖို့ဆို အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းလိုက်နာကြည့်လိုက်နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ Eating-Schedule ကိုသေချာဆွဲပါ
အရင်လိုအလုပ်ချိန်မဟုတ်တော့ရင်တောင် အစားစားတဲ့ Meal-Plan လေးကိုသေချာဆွဲပြီး အဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းစားသောက်ကြည့်ပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ Eating-Schedule ကတော့ မနက်၉ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂နာရီ၊ ညနေ ၆နာရီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့အတိုင်းကြီးတသတ်မတ်တည်းစားရမယ်လို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အစားစားတဲ့ Routine လေးကိုပဲသတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ စားဖို့ဆိုလိုတာပါ။ တကယ်လို့ အဲ့ Schedule ထဲမှာ Snack စားတဲ့ အချိန်ကိုထည့်ဆွဲချင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်။
Healthy Snack တွေဦးစားပေးစားပါ
ကိုယ်က Main Meal အပြင် Snack တွေကိုစားရတာကိုလည်း မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် Unhealthy ဖြစ်တဲ့ Snack တွေထက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ Snack တွေကို ပြောင်းပြီး အစားထိုးကြည့်ပါ။ အာလူးကြော်တွေ၊ အချိုမုန့်တွေစားမယ့်နေရာမှာ Nuts တွေ၊ အသီးခြောက်တွေ၊ Fresh Fruits တွေအစားထိုးစားကြည့်ပါ။ Soft-Drink အချိုရည်တွေအစား သစ်သီးဖျော်ရည်တို့၊ Smoothie တို့သောက်ကြည့်ပါ။ Organic Snack တွေကို Comsume ရင် အရင်ကထက်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းပြီး အဆာလည်းပြေစေပါတယ်။
ပျင်းတိုင်း Refrigerator သွားဖွင့်တာကိုရှောင်ပါ
ကိုယ်တွေမှာ အဲ့အကျင့်ရှိတယ်လေ။ တစ်နေကုန်အိမ်မှာပဲနေနေတော့ ပျင်းတယ်ဆိုပြီး ရေခဲသေတ္တာကိုပဲသွားသွားဖွင့်နေတတ်တယ်။ အဲ့တော့ ဗိုက်မဆာပဲနဲ့လည်း မုန့်တွေမြင်ရင် စားမိရော။ အဲ့ဒါကြောင့် ပျင်းနေရင် မီးဖိုချောင်ဘက်မသွားပဲ တခြား Activity တစ်ခုခုဆီကို အာရုံလွှဲလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တခြား အိမ်ထဲမှာ Cleaning လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ TikTok ဆော့တာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အဓိကက ပျင်းတိုင်း အစားစားတဲ့ဆီ စိတ်မရောက်ဖို့ပဲ။
ကိုယ်က အစားများသည်ဖြစ်စေ၊ အစားနည်းသည်ဖြစ်စေနေ့စဉ်တော့ အိမ်တွင်း ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ကိုတော့ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် အိမ်မှာ စားလိုက်၊ အိပ်လိုက်၊ ထိုင်လိုက်ပဲလုပ်နေရင် လေးလံပြီး လူလည်းပိုဝလာတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ရက်ကို အချိန်အများကြီးမပေးတောင်အနည်းဆုံး နာရီဝက်၊ ၄၅ မိနစ်လောက်ကိုတော့ Exercise နဲ့ Home Work Out လေးတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Overweight ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Vitamin C ရဲ့ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာ
ခုလိုအချိန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဗီတာမင်ဓာတ်တစ်ခုပါပဲ
Vitamin C နဲ့ပတ်သက်လို့ အများစု သိထားကြတာကတော့ အဖျားရောဂါတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်အတွက် ပြင်ပရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကောင်းနေဖို့ အဓိကပါ။ဒါကြောင့်မို့ ခုလိုရောဂါကပ်ဆိုးရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နေကြရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူအတော်များများဟာ Vitamin C ဓာတ်ကို ပုံမှန်သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ ဗီတာမင်စီမှာ အဖျားရောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာထက်ပိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါကောင်းကျိုးအများကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့ Vitamin C ဓာတ်ကို လိမ္မော်သီး ၊ စပျစ်သီး ၊ ရှောက်သီး ၊ ကျွဲကောသီး အစရှိတဲ့သီးနှံတွေကစလို့ ဗီတာမင်စီဖြည့်စွက်အားဆေးတွေကနေပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုသလို လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမိရင်တော့ ညအိပ်မပျော်တာကစလို့ ကျောက်ကပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအထိဖြစ်နိုင်တာ သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်တဲ့ပမာဏနဲ့သာ ပုံမှန်လေးသုံးစွဲပေးမယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ ဗီတာမင်စီ နဲ့ပတ်သက်လို့ များစွာသောအကျိုးရလာဒ်တွေရှိနေသေးတာကို မသိသေးတဲ့သူတွေ သိနိုင်ဖို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Ascorbic Acid လို့လည်း သိကြတဲ့ Vitamin C ဓာတ်ဟာ တော်တန်ရုံဖျားနာမှူတွေကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှူများခြင်းနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝအောင်မစားသောက်ခြင်း ၊အိပ်ရာဝင်ချိန်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းပြီး ဖျားနာမှူတွေအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံစွမ်းအားကို ကောင်းကောင်းမြှင့်တင်ပေးတာကြောင့် ပြင်ပရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းတွေကနေ တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အပြင် ဖျားနာမှူကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ နှာစေး ၊ နှာချေတာနဲ့ဖျားနာပြီးအင်ပြင်ထွက်တာမျိုးတွေကိုသက်သာစေမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပဲ နှလုံး ၊ သွေးတိုး ၊ နဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် သံဓာတ်စုပ်ယူမှူ အားကောင်းတာကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်းကိုလည်း မဖြစ်စေပါဘူး။
စိတ်ဖိစီးမှူကို မကြာခဏရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ဗီတာမင်စီက ကုသမှူတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှူတွေကို ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှူဟော်မုန်းကို လျော့ကျအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရင် ရုပ်လည်းကျတတ်တာမို့ အလှမပျက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှူကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်တဲ့အပြင် ဗီတာမင်စီကို ပုံမှန်သုံးစွဲပေးဖို့မမေ့ပါနဲ။
သွေးတွင်းအဆီစုမှူကို လည်းထိန်းညှိလျှော့ချပေးနိုင်တာမို့ သွေးလည်ပတ်မှူကို ပုံမှန်ဖြစ်စေတဲ့အပြင် အဆီတက်တာ ၊ ဝိတ်တက်တာမျိုးတွေကိုလည်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီကို ပုံမှန်သုံးစွဲပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းနည်းနဲ့ အဆီကျပြီး လှပစေမယ်ဆိုတာ မမေ့ထားသင့်ပါဘူး။
အရေပြားဆဲလ်တွေကို အလျင်အမြန်ကုစားပေးနိုင်တာကြောင့် အနာကျက်မြန်စေတဲ့အပြင် အရေပြားကိုတင်းရင်းလှပစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျန်းမာပြီး ဝင်းမွတ်တဲ့ အသားအရည်ဖြစ်ဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကော်လဂျင်ထုတ်လုပ်မှူကို အားပေးတာကြောင့် အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး အရွယ်တင်နုပျိုစေဦးမှာပါ။
Vitamin C က အရိုးကို ပျက်စီးစေတဲ့ ဆဲလ်ဝင်ရောက်မှူတွေကို တားဆီးပေးပြီး အရိုးသန်မာမှူအားပေးတဲ့ ဆဲလ်တွေကို အားကောင်းစေတာကြောင့် အရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရိုးကိုသန်မာစေတဲ့ အရေးကြီးသတ္တုဓာတ်ဖြစ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ထုတ်လုပ်မှူကို အထောက်အကူပြုပေးတာကြောင့် အရိုးပွရောဂါမဖြစ်အောင်တားဆီးပေးတဲ့အပြင် သွားများကိုလည်းသန်မာစေပါတယ်။
Immune System ကောင်းစေသလို Skin လည်းလှစေမယ့် အစားအစာမျာ
တစ်ခါတည်း2in 1 ပေါ့
အခုချိန်မှာ Covid-19 Second Wave ကြောင့် အားလုံးအိမ်မှာပဲနေပြီး ကျန်းမာအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့် အချိန်တန်ပြီနော်။ ပြီးတော့ အကြံပေးချင်တာကတော့ အခုချိန်မှာ အစားလျှော့စားတာတို့ ဝိတ်ချတာတို့ကို တတ်နိုင်ရင်မလုပ်ကြနဲ့နော်။ အစာအဟာရကိုပြည့်ဝအောင်စားပြီး ကိုယ်ခန္ဓာက Immune System ကောင်းနေမှ ဒီရောဂါတွေကို ခုခံကာကွယ်နိုင်မှာမလား။ အိမ်မှာ အိပ်ရေးဝဝအိပ်၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင်းခန်းလုပ်သလို Immune ကောင်းစေမယ့် အသီးအနှံတွေနဲ့ အစားအသောက်တွေကိုလည်း စားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Healthy ဖြစ်တာတွေပဲစားရမယ့်ဆိုလို့စိတ်မညစ်သွားနဲ့နော်။ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အသီးအနှံနဲ့ အစားအသောက်တွေက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ အပြင် အသားအရေကိုပါပိုပြီး စိုပြေကောင်းမွန်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား မဟုတ်ဘူးနော်။ ပျိုမေတို့ရဲ့ အသားအရေအပြင် လက်သည်း၊ ခြေသည်းနဲ့ ဆံပင်တွေကိုလည်း သန်စွမ်းလာစေတာမို့ Perfect ပဲပေါ့။
ကဲ Stay-Home မှာဒီ အစားအစာလေးတွေစားပြီး Glow လိုက်ကြရအောင်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ဘာလို့ အသက်ရှည်ကျန်းမာလဲဆိုရင် သူတို့လူမျိုးတွေက Green Tea ကို ရေသောက်သလိုကို သောက်သုံးကြပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ လက်ဖက်စိမ်းအရည်က စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေတယ်။ Antioxidants ဓာတ်က Immune System ကို ပိုကောင်းအောင်မြှင့်တင်ပေးသလို Cell အသစ်တွေဖြစ်ပွားမှုကိုအားပေးတယ်။ ဒါကြောင့် Breakfast စားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Lunch Time ပဲဖြစ်ဖြစ် Green Tea တစ်ခွက်ပုံမှန်သောက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်(Yoghurt) ရဲ့ Health Benefit တွေကလည်းအများကြီးပါ။ Clacium ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ Yoghurt က အရိုးတွေကိုသန်မာစေရုံမကပဲ ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပေးတဲ့ Factor တွေကြောင့် ဖျားနာတာတွေ နာမကျန်းတာတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဝမ်းမှန်စေတာကြောင့် ကိုယ်တွင်းကမကောင်းတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတာမို့ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုလည်းရရှိစေပါတယ်။
သလဲသီးကို Skin Care အတွက် Essential Fruit လို့တောင်တင်စားကြပါတယ်။ သူ့မှာ Vitamin C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာမို့ ပြင်ပက ရောဂါပိုးတွေကို အမြင့်ဆုံးတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကိုလည်းချောမွတ်စေပြီး အရွယ်တင်စေပါတယ်။
Berries, Carrots and other yellow fruits
Strawberry၊ Blueberry ၊ Cranberry တို့လို့ Berry အသီးတွေအပါအဝင် အဝါရောင်အသီးအနှံတွေဖြစ်တဲ့ မုန်လာဥနီ၊ သံပုရာသီး၊ ရှောက်ချိုသီး၊ လိမ္မော်သီးတို့မှာ Body Immune System ကို Boost လုပ်ပေးတဲ့ Vitamin A ၊Vitamin C နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တာမို့ ပြင်ပက ရောဂါတွေကို ခုခံပေးပါတယ်။ အသားအရေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်နဲ့ နေလောင်ကွက်တွေကိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေတယ်။ တကယ်လို့ အသီးတွေစားရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း Blender နဲ့ကြိတ်ပြီး Juice၊ Smoothies တို့လိုလည်း လုပ်ပြီးသောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Salmon ငါးတွေမှာ အသားအရည်ကိုကောင်းမွန်စေသလို နုပျိုကျန်းမာစေတဲ့ Fatty Acid နဲ့ Omega3တို့ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ Omega3ကမှတ်ညဏ်စွမ်းရည်ကိုကောင်းမွန်စေသလို Cell အတွင်း Inflammation ဖြစ်တာကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေအတွက် အစာပြေ Snack တွေကို အားလူးကြော်တွေ၊ Fried Food တွေစားမယ့်အစား Nuts တို့လို အစေ့အဆံတွေကို အစားထိုးစားပေးရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အသားအရေကိုရရှိစေပါတယ်။ Almonds၊ Pumpkin Seeds၊ Cashchews၊ Hazelnuts တို့လို Nuts တွေက Vitamin E ပါဝင်လို့အသားအရေကိုစိုပြေစေသလိုတခြားပါဝင်တဲ့ Magnesium၊ Selenium နဲ့ Zinc တို့ကလည်း Inner Body ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေတယ်။ ဒီ Nuts တွေက Low-Carbs လည်းဖြစ်တာမို့ ပျိုမေတို့အတွက် များများစားလည်း ဝိတ်တက်မှာမစိုးရိမ်ရဘူးနော်။
Photo Source from Pinterest.
#Boost Immune System
ပျိုမေတို့အတွက် Underwear နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်များ
ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်စေ၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်စေ Underwear ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပျိုမေတို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ ပျိုမေတို့ တစ်ကိုယ်ရေအတွက် အရေးပါဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Underwear ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်စေ၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်စေ Underwear ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပျိုမေတို့ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုကြတာ နည်းပါးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှက်သင့်သလို ပျိုမေတို့အချင်းချင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ပြီး သန့်ှရှင်းမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ Underwear နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပျိုမေတို့ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတချို့ကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်။
သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် Underwear ကိုရွေးချယ်ပါ။
အရမ်းတင်းကြပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဝတ်လိုက်တဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ချည်သားကဲ့သို့သော အသားကို ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရမ်းတင်းကြပ်နေခြင်းက သင့်အတွက် နေထိုင်ရခက်ခဲစေပြီး ရေရှည်အတွက်လည်း သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိအရေပြားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရွေးချယ်ပါ။
တချို့ အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Sensitive ဖြစ်တတ်တဲ့ ပျိုမေတွေသာမကဘဲ ပုံမှန်အရေပြားအမျိုးအစားရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက်ပါ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်က မိမိအသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပါပဲ။ နေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ ခြောက်သွေ့အောင်လှမ်းပေးခြင်းက မမြင်ရတဲ့ ပိုးတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။
နွေရာသီလိုမျိုး ချွေးထွက်လွန်တဲ့အချိန်တွေမှာသာမက စိုစွတ်တဲ့ မိုးရာသီလိုကာလမျိုးမှာပါ Underwear ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပေးပါ။ Underwear ကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ တစ်ထည်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည် ဝတ်ဆင်ခြင်းက မမြင်ရတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ပေါက်ဖွားနိုင်သလို သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းက သင့်ရဲ့မိန်းမကိုယ်အတွက် များစွာအန္တရယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ ညအိပ်ချိန်တွေမှာ Underwear ကို ချွတ်အိပ်ခြင်းက သင့်အတွက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့အတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
သွားလာတဲ့နေရာအလိုက် Underwear ရွေးချယ်ပါ။
GYM သွားတဲ့အချိန်၊ အလုပ်သွားတဲ့အချိန်၊ ပွဲတက်ချိန် အစရှိသလို မိမိသွားမယ့် နေရာအလိုက် Underwear ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ GYM သွားတဲ့အချိန်ဝတ်ဆင်မယ့် Underwear က G - String လို ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခြင်းက သင့်အတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရာသီလာပြီးနောက် စွန်းထင်းတတ်တဲ့ အစွန်းအထင်းသော်လည်းကောင်း၊ တခြားသော အကြောင်းအရာကြောင့် စွန်းထင်းနေခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း မိမိရဲ့ Underwear မှာ အစွန်းအထင်းရှိနေရင်တော့ အစွန်းချွတ်ဆေးမသုံးဘဲ နောက်ထပ်မဝတ်တော့တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အစွန်းချွတ်ဆေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အစွန်းချွတ်ဆေးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက သင့်အရေပြားအတွက် အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တာကြောင့် Underwear ကို လျှော်တဲ့အခါ အစွန်းချွတ်ဆေးကို ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။
#Underwear for Girl
#Underwear Rules Every Woman
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလိုပဲ ဗိုက်သားပြားချပ်ချပ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း
သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကတစ်ဆင့် ဗိုက်နားက အဆီတွေကို ခြေဖျက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရဲ့လား။ စားသောက်မှုစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ တော်တော်ကြီးကိုသိသာတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ အစားအသောက်က ဗိုက်အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတယ်လို့ မဆိုလိုဘူးနော်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကလည်း Weight ချဖို့ကို အားတက်စေတာ မဟုတ်ဘူးလားနော်။
ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက နေ့စဉ်လုပ်နေကျပုံစံတွေကို အနည်းငယ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ အကျိူးရှိစေမှာပါ။ ကျန်းမာတဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဖြစ်လို့ အဆီတွေမြန်မြန်ကျဖို့ ရောင်းနေတဲ့ ၇ရက်အဆီချဆေးတို့ ပြင်းထန်တဲ့ Diet Plan တွေထက် အများကြီး ဘေးကင်းပြီး စိတ်ချရတာပေါ့။
အိပ်ရာပေါ်မှာ စောစောနေရာယူလိုက်တာက အိပ်ရေးပျက်တဲ့ညတွေကို လျော့နည်းစေတဲ့အပြင် ညသန်းခေါင် ထထစားတဲ့အကျင့်ကိုလည်း ဖျောက်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။ ညဘက်မှာ အနားယူူအိပ်စက်ခြင်းမလုပ်တာက ခနာကိုယ်အတွင်းက Metabolism တွေအလုပ်လုပ်တာကို အားလျော့စေပါတယ်။ ကိုယ်က တစ်ကယ့်ကို Calorie တွေလောင်ကျွမ်းချင်ရင်တော့ အနည်းဆုံး ၇နာရီအိပ်စက်အနားယူပေးသင့်တယ်နော်။
ဆားက နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ ဦးနှောက်အတွက် ကောင်းပေမယ့် ကိုယ်တွေမြန်မာလူမျိူးတွေရဲ့ ဆားစားသုံးမှုပုံစံက ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးထိခိုက်စေပါတယ်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေပြီး မျက်နှာဖောယောင်တာ၊ ဗိုက်ပူတာတွေကိုဖြစ်စေတာပါ။ ဆားလျော့စားတာက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့အရည်တွေကို လျော့နည်းစေတဲ့အတွက် Weight ကျစေဖို့ ပိုပြီး အားပေးပါတယ်။ အမေကိုဟင်းချက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မှာစားမယ့် အစားအသောက်မှာ ဆားလျော့ခိုင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Metabolism တွေကို အရှိန်မြှင့်ပေးမယ့် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုက စားရမယ့်အချိန်ကို စနစ်တကျစားသောက်ဖို့ပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ မနက်စာမစားတဲ့သူတွေက ပုံမှန်မနက်စာစားတဲ့သူတွေထက် သကြားဓာတ်လွန်ကဲနေတတ်ပါတယ်။
ခါးမတ်မတ်လေးနဲ့ ရင်ကော့ပြီးနေတာက သင့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို လှပကောင်းမွန်စေပါတယ်။ တည့်မတ်တဲ့ ကိုယ်နေကိုယ်ထားက ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို အလုပ်လုပ်စေပြီး ညီညာတဲ့ ဗိုက်သားကို ပုံဖော်ပေးပါတယ်။
စမုံစပါး၊ ပင်စိမ်းနဲ့ ဂျင်းက စမ်းသပ်ချက်တွေအရ ဝမ်းဗိုကအတွက် ကောင်းတဲ့ အာနိသင်တွေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစာခြေဖျက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ Enzymes ကို ထုတ်ပေးပြီး အစာခြေဖျက်မှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ အစာတွေ မြန်မြန်ခြေဖျက်တဲ့အတွက် ဗိုက်သားလေးကလည်း ပြားချပ်ချပ်လေးဖြစ်နေစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အစားအစာ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ ဒီဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ထည့်ပါ။
ခနာကိုယ်ကော အသားအရေအတွက်ကော ကောင်းတဲ့ ရေကို ဖြည့်စွက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ခနာကိုယ်က ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာတဲ့အခါ အလိုအလျောက် အရည်တွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး သိုလှောင်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ်က ရေမသောက်လေ ဗိုက်ကို ပိုပူစေတဲ့ မလိုအပ်တဲ့အရည်တွေက ပြည့်လာလေဖြစ်ပြီး ဗိုက်ဖောင်းကားနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ကို ရေရှစ်ခွက် အနည်းဆုံးသောက်ပြီး ရေဓာတ်ပြည့်အောင်နေပါ။
အစေ့အဆံတွေစားတာက သေးသွယ်သွယ်ခါးကို ပိုင်ဆိုင်စေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေရှိပါတယ်။ အစေ့အဆံတွေက Monounsaturated Fat ပြည့်ဝစွာပါဝင်လို့ မုန့်အချိုတွေစားတာထက် ပိုပြီးတင်းတိမ်ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေမှာပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဆားမပါတဲ့သဘာ၀ အစေ့အဆံတွေကို လက်တစ်ဆုပ်စာအတိုင်းအတာလောက်သာ စားဖို့ပါ။
ဗိုက်နဲ့အူထဲက အစားအသောက်တွေကိုခြေဖျက်ဖို့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေထက် အလုပ်ပိုလုပ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလျင်စလို သိမ်းကြုံးပြီးစားတာကို ရှောင်ပြီး အစာစားနေတဲ့အချိန်မှာ ၁၀ကြိမ်ခန့်ဝါးပြီးမှ မြိုချပါ။ ဖြည်းဖြည်းစားတာက အများကြီးစားမိမှာကို ထိန်းချူပ်ပေးပြီး ဗိုက်ပွတာ၊ အစာမကြေဖြစ်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။
#Easy way to lose fat
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မေမေတို့အထူးဂရုပြုရမှာကတော့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို အလွန်အကျွံမလုပ်မိဖို့ပါပဲ။
မေမေတို့ရေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာ မေမေတို့အတွက် အရမ်းကိုဂရုစိုက်ရတဲ့အချိန်ပါ။ စိတ်ရော လူရော ကောင်းကောင်းအနားယူမှသာလည်း ကျန်းမာတဲ့ Baby လေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးဖွားနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေမယ်။ အလုပ်တွေ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင် မေမေတို့အတွက်သာမက ဗိုက်ထဲက Baby လေးအတွက်လည်း ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် မေမေတို့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မေမေတို့အထူးဂရုပြုရမှာကတော့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို အလွန်အကျွံမလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ အိမ်မှု ကိစ္စလုပ်တာဟာ မပင်ပန်းဘူးဆိုပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေဟာ Baby လေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကို မလုပ်ရဘူးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
မေမေတို့ အဝတ်ကိုအချိန်ပေးပြီးလျှော်ခြင်းဟာ အအေးမိစေရုံသာမက အသုံးပြုတဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့ အမွှေးဆီတွေဟာလည်း ဓာတုပစ္စည်းတွေ အနည်းနဲ့ အများပါဝင်တတ်တာကြောင့် မေမေတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Baby လေးအတွက်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွှတ်တာကြောင့် ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ လျှော်ပြီးသားအဝတ်တွေကို လှမ်းတဲ့အခါမှာလည်း အဝတ်ခြင်းကို သယ်ရခြင်း၊ အမြင့်ကို လှမ်းရခြင်းတို့ကြောင့် အကြောတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အလေးအပင် မ, မ ရဘူးဆိုတာကိုတော့ မေမေတို့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြသနေတဲ့ဆရာဝန်ကလည်း ဒါကို အထူးပြုမှာကြားထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ မေမေတို့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ အလေးအပင် မ ခြင်းဟာ မေမေတို့ရဲ့ ခါးရိုးကို နာကျင်စေရုံသာမကဘဲ လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအထိပါ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ အထူးဂရုပြုပေးပါနော်။
ဂက်စ်မီးဖိုဖြင့် ထမင်း၊ ဟင်းချက်ခြင်း
ဖြစ်နိုင်ရင် ဂက်စ်မီးဖိုနဲ့ ထမင်း ဟင်းချက်ခြင်းကို မပြုလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ မီးဖိုကလာတဲ့အပူသာမက ဂက်စ်က ထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ မေမေတို့အတွက်သာမက Baby လေးအတွက်ပါ အန္တရယ်ရှိစေနိုင်တာမို့ မေမေတို့ ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်နော်။
စားပွဲသန့်ရှင်းရေး၊ တံမြက်စည်းလှဲခြင်းလောက်ကို လုပ်နိုင်ပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတုသန့်ရှင်းရေးအရည်တွေကို အသုံးပြုရမယ့် သန့်ရှင်းရေးမျိုးကိုတော့ မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ သာမာန်အချိန်မျိုးမှာတောင် ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာ ဓာတ်မတည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပိုမိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မေမေဟာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီချိန်မှာ အဝေးကချစ်တာ ဗိုက်ထဲက Baby လေးအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးကလေး၊ ကြောင်ကလေး နဲ့ ဌက်ကလေးတွေဟာ သာမာန်အချိန်တွေမှာ ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေတာက မသိသာနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာတော့ သူတို့လေးတွေမှာ ကပ်နေတဲ့ ပိုးမွှားလေးတွေနဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေက မေမေတို့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့် ဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ Baby လေးဆီကို ရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မီးပူတိုက်ရာမှာ ထိုင်ပြီးတိုက်ခြင်းက မေမေတို့အတွက် ဗိုက်ကို ထောက်စေနိုင်တာကြောင့် ဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ Baby လေးကို အသက်ရှုကြပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီး မီးပူတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်ကြာကြာရပ်နေခြင်းက ခြေထောက်တွေကို ဖောရောင်စေတာကြောင့် မေမေတို့ မလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ မီးပူတိုက်တာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
မေမေတို့ရေ ကျန်းမာတဲ့ Baby လေးမွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အလုပ်လေးတွေကို မလုပ်ဘဲနေကြရအောင်နော်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ Baby လေးရဲ့ ဖေဖေ ဒါမှမဟုတ် အိမ်သားတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒီလိုအချိန်လေးမှာ သက်သောင့်သက်သာလေးနဲ့ Baby လေးကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲ အားမွေးထားကြရအောင်နော်။
#Tips for Pregnant Mom
ဂျပန်မလေးတွေရဲ့ သွယ်သွယ်လှလှ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
ထမင်းကို တူနဲ့စားတာက ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေကျန်းမာပြီး နုပျိုနေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိပြီးပြီလား? ဂျပန်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေများနေတာ ဘာကြောင့်လဲ စဉ်းစားမိကြမှာပါ။ သူတို့ စားတဲ့အစားအသောက်ကအစ ချက်ပြုတ်တဲ့ပုံစံအထိ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို အသက်ရှည်စေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါ။ အိုမီဂါပြည့်ဝစွာပါဝင်တဲ့ငါး၊ Light Carb နဲ့ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ဆေးဖက်ဝင်လက်ဖက်ရည်တွေက ဂျပန်လူမျိုးတွေ ကျန်းမာလှပခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မလေးတွေ သွယ်သွယ်လှလှ Body၊ ဝင်းပနေတဲ့အသားအရေနဲ့ ဆံပင်စိုစိုပြောင်ပြောင်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတာက ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အ့သြသင့်စရာမရှိပါဘူးနော်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် Diet တွေထက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ Japanese Diet ကို လုပ်ကြည့်တာနဲ့ အများကြီး အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ ထွေထွေထူးထူး လုပ်စရာမလိုပဲ ဒီအချက်လေးတွေလိုက်နာရုံနဲ့ လှပတဲ့ Body နဲ့ အသားအရေကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်မလားနော်။
ထမင်းစားချိန်က ဂျပန်လူမျိုးတွေ တန်ဖိုးထားရတဲ့အချိန်တစ်ခုပါ။ ခနကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အားအင်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် လမ်းလျှောက်နေရင်းစားတာ၊ ကဗျာကယာစားတာမျိုးကို ဂျပန်တွေက မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ မယဉ်ကျေးတဲ့သူလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေ ထမင်းစားတိုင်း တူအသုံးပြုပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း စားသောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အများကြီးမစားမိဖို့နဲ့ ဦးနှောက်ကို ဗိုက်ပြည့်ကြောင်း အချက်ပြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ထူးခြားတာက ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ထမင်းဝိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ အလုပ်လုပ်ပြီးစားတာတွေကို တားမြစ်ပါတယ်။ Chopstick အသုံးပြုပြီး စားတာက စားသုံးတဲ့ ပမာဏနဲ့ အမြန်နှုန်းကို အမှန်တကယ်နှောင့်နှေးစေတာကော သိရဲ့လား။
ဂျပန်တွေရဲ့ ထမင်းစားဝိုင်းမှာ အစားအသောက်တွေက စုံစုံလင်လင်ဖွယ်ဖွယ်ရာရာပြင်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဟင်း ပွဲအများကြီးဖြစ်နေတာကြောင့် ဟိုနှိုက်စား၊ ဒီနှိုက်စားရင်း အများကြီး စားမိတဲ့ ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေမှာပါ။ ဆီပြန်တွေ၊ ဆီကြော်တွေ မျိုးစုံချက်ပြီးစားတာမျိုးတော့ လုံး၀ No ပါနော်။ ကယ်လိုရီနည်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဟင်းအမယ်တာဖြစ်ရပါမယ်။
မနက်စာစားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တက်တာကို ဟန့်တားပေးပါတယ်။ ဂျပန်တွေအတွက် နေ့တစ်နေ့ကို အကောင်းဆုံး စတင်ဖို့အတွက် မနက်စာကို အပြည့်အ၀ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားသင့်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ၄ နာရီနောက်ပိုင်း အဆာပြေစားတာကို ရှောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူ Makiko Sano က ကျွန်မတို့ ဂျပန်လူမျိူးတွေရဲ့ အိမ်မှာ အချိူစားဖို့အတွက်ကိုလည်း ဆန္ဒမပြင်းကြပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ဂျပန်အမျိူးသမီးတွေကို ကြည့်ရင် သွယ်လျနေကြတာပါ။ အဲ့ဒီအချိူတွေအစား အသီးအနှံတွေ၊ ကန်စွန်းဥတွေကိုသာ စားသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တွေ မြန်မာလူမျိူးတွေလို လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်သလိုပဲ Green Tea ကို တစ်ရက်လုံး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သောက်သုံးကြပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းထက် လက်ဖက်စိမ်းက မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးရှိတဲ့ သဘာဝဆေးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အညီညွတ်ဆုံးလက်ဖက်ခြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်ဖက်စိမ်းက Antioxidants များများစားစားပါဝင်တဲ့အပြင် free organical တွေကိုတိုက်ဖျက်နိုင်အောင်ကူညီပေးပြီး အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ လက်ဖက်စိမ်း ကို ဘယ်လောက်သောက်ကြလဲဆိုရင် လမ်းတစ်လမ်းဆီမှာရှိတဲ့ Vending Machine တွေမှာတောင် Green Tea နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သောက်စရာတွေ အမျိူးအစုံကို တွေ့ရမှာပါ။ လက်ဖက်စိမ်းက အရွယ်တင်နုပျိူစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျစေပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေက အနီရောင်အသားအစား ပင်လယ်စာကိုစားဖို့ပဲရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အနီရောင်အသားက အဝလွန်တာ၊ သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရောမြင့်မားခြင်းရဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဂျပန်မှာ အစားအများဆုံး Meal က ဆန် ဒါမှမဟုတ် ခေါက်ဆွဲတစ်မျိူးမျိူးကို ပင်လယ်စာနဲ့ စားသုံးတာပါ။
ငါးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းစရာဆိုပေမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ငါးမှာ ပရိုတင်း၊ Omega 3၊ Fatty Acid တွေပါဝင်လို့ ကျန်းမာဖို့ဆို ဂျီးများလို့မရပါဘူးနော်။ ငါးစားရင် ဦးနှောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဦးနှောက်၊ နှလုံးနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ပင်လယ်စာတွေက ဗိုက်ပူတဲ့သူတွေအတွက် ဝမ်းဗိုက်အဆီကို ကျစေပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အာရုံကြောအားနည်းတာကို လျော့ချစေပါတယ်။
လမ်းလျှောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဖို့အတွက် အလွယ်အကူဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးပါ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်လေ့ရှိပါတယ်။ စက်ဘီးကိုလည်း အလုပ်သွား၊ ဈေးဝယ်၊ ကျောင်းသွား ပုံမှန်စီးလေ့ရှိကြပါတယ်။ စက်ဘီးစီးတဲ့သူများလို့ ဂျပန်ကလမ်းလေးတွေမှာဆိုရင် စက်ဘီးတွေ အစီအရီနဲ့ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တာက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေတယ်၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ ကာကွယ်ပေးတယ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေပါတယ်။ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး မိနစ်သုံးဆယ်တော့ အချိန်ပေးပြီး လမ်းလျှောက်ပါ၊ စက်ဘီးနင်းပါနော်။
Baby လေးတွေ မွေးဖွားရလွယ်ကူစေဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ
ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်းတွေက မေမေတို့အတွက် အထောက်အကူပြုလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အတွက် အဓိက လိုအပ်တာကတော့ ကျန်းမာဖို့ပါ။ မေမေတို့ ကျန်းမာမှသာ သားသားမီးမီးလေးတွေကို မွေးဖွားရလွယ်ကူစေမှာပါ။ ဒီလို ကျန်းမာဖို့ကလည်း ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအပြင် မေမေတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အစားအသောက် အနေအထိုင် ဂရုစိုက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးရသလို မွေးဖွားရလွယ်ကူစေဖို့အတွက်ကိုလည်း သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်းတွေက မေမေတို့အတွက် အထောက်အကူပြုလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာသာမကဘဲ ပုံမှန်အချိန်တွေမှာပါ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေတဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လမ်းကို ပုံမှန်လျှောက်ပေးခြင်းက မွေးဖွားရလွယ်ကူစေရုံသာမက မိခင်ကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း ချောမွေ့တဲ့လမ်းနဲ့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် ဖိနပ်ကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေတို့ဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ များနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် ရင်သွေးတွေကို မထိခိုက်ရအောင် ပုံမှန်လေး ယောဂပြုလုပ်ပေးပါ။ ယောဂပြုလုပ်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်ကိုလည်း လန်းဆန်းစေတာကြောင့် မေမေတို့ မဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေကူးခြင်းဟာ အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ရေကူးခြင်းဟာ ကိုယ်လက်ညောင်းညာမှုကို လျော့ကျစေတာကြောင့် ရေကူးပြီးချိန်မှာတော့ မေမေတို့အတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။
မနက်စောစော အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းက မေမေတို့အတွက် နေထိုင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေမှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၊ အသက်ရှုမဝဖြစ်ခြင်းတွေကို ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ မနက်စောစောလေက လေကောင်းလေသန့်ကို ရစေနိုင်တာကြောင့်လည်း စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေမှာပါ။
အေရိုးဗစ်ကစားခြင်းဟာ သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပြီး ကျန်းမာခြင်းကို အထောက်အကူပြုစေနိုင်တာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။
မေမေတို့ရေ သားသားမီးမီးတို့ကို မွေးဖွားရလွယ်ကူစေဖို့အတွက် ပြုလုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို သိပြီဆိုတော့ မပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။
တစ်ခုသတိပြုရမှာကတော့ နှလုံးရောဂါရှိခြင်း ၊ ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်း ၊ခြေဆစ်လက်ဆစ်များနာကျင်ခြင်း၊ အသက်ရှုရတာခက်ခဲခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါမှသွေးထွက်ခြင်း၊ အချင်းအောက်ရောက်နေခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျထားဖူးခြင်းနဲ့၊ အိမ်ခေါင်းအားနည်းခြင်းစတာတွေကို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ မေမေလောင်းတို့ အနေနဲ့ကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှသာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်နော်။